I-Chirpify: Yongeza uguquko kuLiso lwakho lweMidiya yokuSebenza | Martech Zone
Hlanganisa yenza abathengisi ukuba basebenzise izinto ezibangela ukuba abathengi bathathe inxaxheba nophawu lwalo naliphi na ijelo kwimidiya yoluntu. Unokwenza kusebenze kwiimpawu zokuziphatha ukuze ufumane abasebenzisi beendaba zosasazo ukuba bathenge, bangenise inkuthazo, bafumane ukufikelela kumxholo okhethekileyo, njl. Nantsi umzekelo:
Ngale Cawa, jonga intengiso yethu entsha yeTV, jonga i-hashtag kwaye uzikhuphele ipakethe yeencasa zethu ezintsha. #ukulele pic.twitter.com/ASU58SL1KX
-Oreo Cookie (@Oreo) January 24, 2014
Xa umsebenzisi esebenzisa i-hashtag ethile ukungena kumyalezo wokuthengisa, Hlanganisa uphendula kwangoko egameni lophawu. Baqokelela idatha.
Yindlela elungileyo yokwakha iprofayile yomthengi opheleleyo kwaye ufunde ukuba yeyiphi abalandeli abanomdla kwezonyuselo kwisitishi ngasinye. Iqonga lokuphendula ngokuthe ngqo lisebenza kuFacebook, kuTwitter naku-Instagram. Nanku omnye umzekelo obalaseleyo:
Ukuzonwabisa ngeSpalding, usebenzisa iChirpify ukulungiselela Unyuselo-kwindawo. KwiiRascal Flatts kunye neJason Aldean zaseKhonsathi zasehlotyeni, abahamba ikonsathi baya kubona iChirpify Iintshukumo phezulu kwiJumbotron, kunye nefowuni yokwenza into: Ngenelela ukuPhucula isihlalo! Tweet #Ngena #BurnItDownTour.
Iqonga leChirpify limamela ezo #actiontags, kwaye liphendule kumntu ngamnye (egameni lomculi) ngomyalezo kunye nekhonkco lokungenela ukhuphiswano. Elo khonkco livula ifomu yethu yokuguqula iselfowuni apho siqokelela khona idilesi ye-imeyile (kunye nesiphatho sabo se-Twitter). Ophumeleleyo ukhethwa kwaye aziswe kwangoko ngaphambi kokuba isenzo sokuqala siqale- kwaye bona (kunye nomhlobo) bayamenyelwa ezantsi kwindawo yokuhlala ye-VIP.
I-Chirpify nayo idityanisiwe kubahlalutyi ukubonelela abathengi ngeziphumo:
Sisebenza nabathengi kwiphulo ngalinye kunye nokuqhubeka rhoqo. Ngokwesiqhelo, ii-brand okanye iiarhente zabo zisondela kuthi ngenyathelo lokuthengisa abangathanda ukulisebenzisa Hlanganisa Ukwenza kusebenze- kwaye sisebenza nabo ukumisela iqonga kwiimfuno zabo ezithile.
tags: intshukumochirpifyimpendulo ethe ngqo kwimikhankaso yemidiya yoluntuUkunyuswaezorhwebo kwimidiya yoluntuuguquko kwimidiya yoluntuukuguqulwa kweendaba ezentlaloimithombo yeendaba zentlalokubangelaUnyuselo lweendawo